Umlinganiswa cottage cwaka, obutofotofo
Saint-Aignan, Pays de la Loire, France
Uvimba sinombuki zindwendwe onguEric
Kwindlu yesishumi endala ye-sciècle yeshumi elinesixhenxe ebuyiselwe ngokupheleleyo kunye nezixhobo zendalo (ikalika, i-hemp, i-terracotta kunye ne-parquet esuka kwimithi ekwipropati) ukuya kumda wesikhumbuzo sembali yesizwe, ejikelezwe ngumjelo. Bucolic kunye nokuphumla eSouth Pole. Isitiya esivulekileyo se-1000 m2. Umgangatho ophantsi, igumbi lokuhlala le-45 m2 (isitovu somthi, iTV, isidlali seDVD) kunye nekhitshi (i-microwave, i-dishwasher, ifriji, isitovu, i-oven), indawo yokuhlamba ngomatshini wokuhlamba kunye nesomisi, i-WC, igumbi lokulala eli-1 elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela (ishawari. kunye nendlu yangasese). Umgangatho wokuqala: Amagumbi okulala ama-4, ama-2 anxibelelana nebhedi eyi-1 eyi-140, i-1 eneebhedi ezi-2 zokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo, amagumbi okulala ama-2 aneebhedi ezi-2 ngalinye kunye nama-90 ngalinye linegumbi lokuhlambela (ishawari) kunye nendlu yangasese. Izixhobo ezongezelelweyo: ifriji, i-WIFI, ixhotyiswe ngokupheleleyo kwiintsana. Ufikelelo olukhubazekileyo. Ukufudumeza kunye nelinen yebhedi (iibhedi ezenziwe) zibandakanyiwe. Ukuloba kwisiza nakwintenetya kamasipala kwilali.
Ukunokwenzeka kokuthenga kunye neendawo zokutyela ukuya kwi-6 km. Le Mans kwi-32 km. I-Alencon kwi-35 km. Isikhululo seenqwelomoya esincinci sabucala 8 km (Monhoudou). Ithuba lokuza ngenqwelo-ntaka. Iindawo ezininzi kunye neenqaba ngaphakathi kwe-1:30 yendlela.
Ugcino ngeveki ukusuka ngoMgqibelo ukuya ngoMgqibelo 16H 10H. Ngamaxesha ahlukeneyo, nceda uqhagamshelane nathi. Ixabiso € 790 kubandakanya ilinen (iibhedi ezenziwe), ukufudumeza (ngexesha) kunye nombane. Iitawuli ziyafumaneka ngeendleko ezongezelelweyo (€ 8 ngomntu ngamnye). Umrhumo wokucoca we-50 € uya kusetyenziswa ukuba ucoceko lungenasici. Idiphozithi ye-300 € iya kucelwa xa ifika.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Aignan